Kedu mmehie 7 na-egbu egbu ▷ ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Kedu ndị bụ 7 na-egbu egbu mmehie. E hiwere ndepụta mmehie asaa ahụ na-egbu egbu n'ihe dị ka narị afọ nke anọ AD Omenala Katọlik na-ejide ya mmehie asaa ahụ na-egbu egbu na-ebute mmehie ndị ọzọ niile. Akwụkwọ Nsọ ekwughị nke a, kama o kwetara na ha bụ mmehie na e kwesịrị izere ya.
1 Gịnị bụ mmehie 7 na-egbu egbu dị ka Ụka ​​Katọlik si kwuo
1.1 1. Nganga
1.2 2. Anyaụfụ
1.3 3. Anyaukwu
1.4 4. Iwe
1.5 5. Agụụ
1.7 7. Ugwu
2 Ọ̀ bụ mmehie 7 na-egbu egbu nke Akwụkwọ Nsọ?
Gịnị bụ mmehie 7 na-egbu egbu dị ka Ụka ​​Katọlik si kwuo
Ejikọtara ya na ihe efu na nganga. Nganga bụ mgbe mmadụ chere na ya ka ndị ọzọ, na-eleda ndị ọzọ anya. Ọ bụkwa enweghị mmasị na anyị dabere na Chineke. Nganga bụ ihe megidere ịdị umeala n'obi. Baịbụl kwuru na a ga-eweda ndị mpako ala, ma a ga-ebuli ndị dị umeala n’obi elu.
N'ihi na ị na-azọpụta ndị e wedara n'ala, ma anya gị na-ele ndị mpako anya iweda ha. 2 Samuel 22: 28
Anyaụfụ bụ ụdị anyaukwu . Ndị anyaụfụ adịghị aṅụrị ọṅụ mgbe onye ọzọ nwetara ngọzi, n’ihi na ọ bụ nanị onwe ha ka ha na-achọ ngọzi ahụ. Anyaụfụ bụ ịchọ ọdịmma onwe onye nanị. Baịbụl dọrọ anyị aka ná ntị ka anyị ghara inwe anyaụfụ, kama ka anyị na-enwe afọ ojuju n’ihe anyị nwere ma na-aṅụrị ọṅụ n’ọṅụ ndị ọzọ.
"Ka anyị ghara ịnya isi, na-akpasu ibe anyị iwe, na-enwere ibe anyị anyaụfụ." Ndị Galetia 5:26
Anyaukwu bụ njikọ na-adịghị mma na akụ na ụba. Onye anyaukwu na-akpakọba akụ na ụba, ọ naghị amasị imefu ego, ọ chọghịkwa ịkọrọ ya onye ọ bụla. Anyaukwu bụ ịhụ ego n'anya. Baịbụl na-akụziri anyị ka anyị na-emesapụ aka, ọ bụghị ịnara ego gabiga ókè.
Ya mere, inwe ihe oriri na ebe obibi, ka anyị nwee obi ụtọ na nke a.
N'ihi na ndị chọrọ ịba ọgaranya na-adaba n'ọnwụnwa na ọnyà, na n'ime ọtụtụ agụụ ihe ọjọọ na-enweghị uche na nke na-emerụ ahụ, nke na-emikpu mmadụ n'ime mbibi na ịla n'iyi;
n’ihi na mgbọrọgwụ nke ihe ọjọọ nile bụ ịhụ ego n’anya, nke ụfọdụ chọsiri ike, tụfuo okwukwe ha, werekwa ọtụtụ ihe mgbu maapu.”
1 Timoti 6:8-10
Iwe na-ewe oke iwe, na-eme omume obi ọjọọ ma ọ bụ ime ihe ike. Enwere ihe na-eme ka anyị were iwe na n'ụzọ ziri ezi, ma iwe na-emepụta mmeghachi omume na-ezighị ezi. Onye iwe na-achị na-akpọ nwanne ya asị ma chọọ ịbọ ọbọ, na-enweghị ike ịgbaghara. Akwụkwọ Nsọ na-akụziri anyị ka anyị na-achịkwa iwe anyị, jiri ezi ihe na-emeri ihe ọjọọ.
“Unu abọrọla onwe unu ọbọ, ndị m hụrụ n’anya, kama hapụnụ ohere maka ọnụma Chineke; n'ihi na edewo ya n'akwukwọ nsọ:
Ndị Rom 12: 19
Agụụ ihe ọjọọ bụ ọchịchọ nke ihe ụtọ anụ ahụ́ na-ezighị ezi. Onye agụụ ihe ọjọọ na-achị na-ebi ndụ maka ihe ụtọ, n’ejighịkwa onwe ya. Agụụ na-eduga n'ịkwa iko, n'ihi na mmadụ adịghị achịkwa ọchịchọ ya. Baịbụl gbara anyị ume ka anyị gbanahụ ịkwa iko ma chịkwaa ahụ́ anyị.
Gbanarị ịkwa iko ọsọ. Mmehie ọ bụla ọzọ nke mmadụ na-eme bụ n'èzí ahụ; ma onye nākwa iko nēmehie megide aru nke aka ya.
1 Ndị Kọrịnt 6:18
Erimeri: kedu mmehie 7 na-egbu egbu
Erimeri na-eri ihe karịa ka ọ dị mkpa, naanị n'ihi ọchịchọ iri nri. O nwekwara njikọ na ịṅụbiga mmanya ókè na enweghị njide onwe onye. Ezé na-atọ ụtọ na-eche naanị maka ụtọ iri nri na imerụ ahụ nke ya. Baịbụl na-akụziri anyị ka anyị zere ịṅụbiga mmanya ókè na iribiga ihe ókè na ịkwanyere ahụ́ anyị ùgwù.
Ugwu anaghị achọ ịrụ ọrụ. Anyị niile nwere ikike izu ike, mana anyị ga-arụkwa ọrụ iji kwado ezinụlọ anyị. Onye umengwụ na-agbanarị ibu ọrụ ya na-ebute naanị nsogbu. Baịbụl dọrọ aka ná ntị na ndị umengwụ ga-emecha daa ogbenye, ma ndị dị uchu ga-enweta ụgwọ ọrụ.
Ọ̀ bụ mmehie 7 na-egbu egbu nke Akwụkwọ Nsọ?
Akwụkwọ Nsọ enweghị ndepụta nke mmehie na-egbu egbu, ma n’Ilu 6:16-19, anyị pụrụ ịhụ ndepụta nke mmehie. nmehie asa ka Jehova nākpọ asì:
Ihe isii kpọrọ Jehova asị,
Ọ bu ezie na asa kpọrọ nkpuru-obi-ya asì:
na anya mpako, na ire ugha,
na aka na-awụfu ọbara na-emeghị ihe ọjọọ,
El obi nke na-eche echiche ọjọọ,
Ụkwụ ndị ahụ mere ọsọ ọsọ gaa gbagara ajọ omume,
Onye akaebe ụgha nke na-ekwu okwu mentiras,
Na nke na-akpata esemokwu n'etiti ụmụnna.
Mme N̄ke 6: 16-19
Anyị na-atụ anya na akụkọ a ga-enyere gị aka ịghọta ihe mmehie 7 na-egbu egbu bụ na ihe sitere na ya. Ọ bụrụ na ị chọrọ ugbu a ịmụta imeri mmehie site na usoro ndụmọdụ Akwụkwọ Nsọ, nọgide na-eme nchọgharị Discover.online.